Askar Wareegto soo saartay | allsanaag
Askar Wareegto soo saartay
Dawladnimaddii Puntland oo qarka u saaran inay burburto.
Labaddii Tiir ee ugu muhiimsan dawladnimadu , waa amniga iyo caddaladda. Maanta dawladda Puntland labadII Tiir ee dawladnimadu ku dhisnayd ayaa weerar lagu yahay, Waxaana wiiqaya oo weerar ku ah madax hore oo Puntland soo martay oo hadda u arka in jidka qaska iyo fawdadu yahay kan ugu dhakhsiyaha badan oo mar labaad ay ku hanan karaan hogaanka PUNTLAND.
Bilahan danbe, Magaalada Boosaaso waxa lagu dilay madax ka mid ahayd dawladda Puntland ee hadda jirta oo isugu jiray Taliyaal iyo Siyasiyiin.
Dadqalatooyinkii dadkan dilay oo ka tirsanaa ururka argagixisada alshabaab ayaa gacanta lagu soo dhigay, waana la xiray si maxkamad loogu hor keeno denbiyaddi ay u qirteen sirdoonka Puntland inay gaysteen. Nasiib xumo madaxdii hore ee Puntland oo isticmaalaya odayaasha degaanka qaarkood ayaa banaan baxyo rabshado wata ka sameeyey magaalada Boosaso, Iyaga oo u doodaya Alshabaabkii dadkkii ay dileen u xirnaa in la sii daayo . Arintan ujeedadda laga laha ayaa waxay ahayd in beelaha maanta nabadda ku wada nool Boosaso in layska hor keeno.
Maamulka Puntland oo lagu amaanay sidii deg dega ahayd oo ay ku soo qabqabteen Alshabaabka amni xumada ka waday magaalada Boosaaso, ayaa markii ay arkeen sida khaldan oo Mucaaradka Puntland iyo Aaran jaan ay wax u wadaan oo ay kursiga ku raadinayaan ayaa waxay sameeyeen tanaasul ah in sirtii ay ahayeen qaarkood ay sii daayaan,si bulshada Puntland ee nabadda jecel xaqiiqda loo tuso. Waxayna warbaahinta hor keeneen Dadqal yar oo qiranaya denbiyaddii uu ku kacay iyo dadkii oo gardarada ay u laayeen . Odayaasha Boosaaso iyo Aaran jaan Dadqalkan yar iyo asxaabtiisa ayeey u doodayeen in la sii daayo oo magaalada Boosaaso ay joogaan Eheladdi dadkooda la dilay.
Arinta labaada oo mucaaradka Puntland ka wadaan Puntland waa ciidamada qaarkood oo ay u istcmaalayaan qaab khaldan.
Maalmo ka hor mucaaradka Puntland waxay qaab beeleed u isticmaaleen qaar ka mid ah Ciidanka Puntland, waxayna qabsadeen xaruntii sharci dejinta Puntland. Iyaga oo arintan u sameeyey cabsi gelin madaxda Puntland oo aan degaan ahaan ka soo jeedin caasimadda Puntland.
Maantana markii ugu horaysay Caalamka, ayaa taliye ka mid ahaa Askartii maamilntii dhowayd soo weerartay xarunta sharci dejinta Puntland wuxuu soo saaray WAREEGTO UU ku leeyhay mushahaar ma qaadan dowr bilood. Halka wasaaraddi maaliyadda Puntland ay soo bandhigtay cadaymo mushahaar la siiyey Taliyahan iyo ciidankiisa la jooga Garowe, Taliyahan wareegtada soo saaray wuxuu ilaaway inay jiraan Askar kale oo Puntland ah oo joogta a Galgala, Qandala, Gaalkacayo Buuhoodle iyo Badhan oo iyaga oo gaajaysan difaacaya maamulka Puntland
Ugu danbayntii Maamulka Puntland iyo taliyaha guud ee Ciidanka Puntland ayaa laga sugayaa jawaabta ay ka bixiyaan askartii labada goor sharciga baalmaray oo haddana wareegtada soo qortay . Sharciga kowaad oo Asakarta Garowe joogtaa ay jebiyeen waa amar diidmo dawladeed iyo isku day inqilaab. Sharciga labaad ee Askarta Garowe joogtaa jebiyeen ayaa waxay tahay Puntland waa Beelo wax isku darsaday. Beel ka mid ah beelihii wax isku darsaday ayeey astaantoodii ixtiraami waayeen oo si toos ah u soo abaareen si ay uga dhigtaan Jaranjaro ay dhoolatus ugu sameeyaan dawladda hadda xilka haysa.
← Gacan ku dhiiglayaan denbigoodii qirtay Kulan Lagaga Hadlayay Amaanka Boosaaso →